दीपिकाको दोस्रो कहिले ? - मनोरञ्जन - नेपाल
दीपिकाको दोस्रो कहिले ?
दीपिका प्रसाईंको डेब्यु फिल्म ऐश्वर्य हिट भएन, जसोतसो लगानीचाहिँ उठायो । फिल्मको एकल हिरोइन थिइन् उनी । अभिनय र सौन्दर्यले धेरथोर चर्चा बटुल्यो पनि । यस हिसाबले उनलाई फिल्मको कमी नहुनुपर्ने । किनभने, हामीकहाँ फिल्म फ्लप हुँदासमेत हिरोइनलाई भ्याइनभ्याई हुन्छ । तर, दीपिकालाई यस्तो मौका मिलेको छैन । र, अझसम्म कुनै फिल्ममा औपचारिक रुपमा अनुबन्ध भएकी छैनन् । जानी नजानीमा उनको अभिनय रहने त भनिएको छ । तर, औपचारिक सम्झौता हुन बाँकी छ । फिल्म नपाउँदा कतिपय हिरोइन म्युजिक भिडियोमा व्यस्त हुन्छन् । दीपिकालाई म्युजिक भिडियोमा समेत देखिएको छैन । फिल्म र म्युजिक भिडियो नपाएको हो कि नखेलेको ? उनी आफैँ जानून् । तर, फिल्मवृत्तमा उनको चर्चा सेलाउँदै गएको चाहिँ सत्य हो ।